पढाएर भन्दा मौरी पालेर बढी कमाई गर्ने शशी सर – Gulmiews
पढाएर भन्दा मौरी पालेर बढी कमाई गर्ने शशी सर
गुल्मी साउन १४ । गुल्मीका एक शिक्षकले आफ्नो तलव भन्दा बढि मौरी पालनबाट कमाउन थालेका छन् । हर्दिनेटा, २ धरमपानीका शशी सरका नामले परिचित शिक्षक चतर्भुज पन्थले गत वर्ष देखि सुरु गरेको व्यवसायीक मौरी पालनबाट वार्षिक ३ लाख बढि चोखो आम्दानी थालेका हुन् ।
भानु प्राथामिक विद्यालय हर्दिनेटा ४ रुम्झाटार–देउरालीका शिक्षक रहेका पन्थले प्रा.वि. तह शिक्षकको तलव वार्षिक सरदर ३ लाख बुझ्ने गर्दछन् । ‘मैले पढाउन थालेको २२ वर्ष भयो, अहिले सरदर वार्षिक ३ लाख तलव बुझ्ने गर्दछु’–उनले भने–‘तर गत वर्षबाट सुरु गरेको मौरी पालनबाट सुरुकै बर्ष तिन लाख रुपैयाँ आम्दानी लिएँ । ’
उनले गत वर्ष ७२ वटा मौरीका घार विभिन्न गाविसका कृषकहरुलाई ४ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरे । त्यसबाट उनले खर्च कटाएर चोखो आम्दनी गरे । एक लाख रुपैयाँ महबाट कमाए । यस वर्ष उनले जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई सय वटा घार बनाएर बुझाउने सम्झौता गरेका छन् ।
त्यसबाट उनले ६ लाख रुपैयाँ पाउन छन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले त्यस हर्दिनेटा, दिगाम, विरवास, जुभुङ्, हुँगा सहित पाँच गाविसलाई मौरी पालन पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गरेको छ । अहिले ति गाविसका प्राय प्रत्येक गाविसमा मौरी नपाल्ने कृषक नभएको शिक्षक पन्थले बताए । मौरी पालन र घर घरमा व्यवसायीक तरकारी र फलफुल खेती गर्न सके अवका दिनमा कुनै पनि नेपाली धन कमाउन विदेश जान नपर्ने उनको धारणा रहेको छ । विगत लामो समय देखि उनले सयौं वोट आँप , लिची, ओखर, रुद्ररक्ष जस्ता फलफुल खेती समेत गर्दै आए्का छन ।
उनि सहित हर्दिनेटाका झण्डै दुई दर्जन कृषकहरुले सरदर वार्षिक १ लाख देखि ३ लाख सम्म मौरी पालनबाट कमाउन थाले पछि त्यहाँका कृषक एक पछि अर्को हुँदै आकार्षित भएका हुन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत चेतनाथ अधिकारीको कार्यकालमा व्यवसायीक तरकारी, फलफुल खेती, माछा पालन र मौरी पालन निकै फस्टाएको शिक्षक पन्थ बताउ छन् ।
उनले भने–‘ कृषिका चेतनाथ सर र फर्शुराम सरको ठुलो देन रहेको छ, उहाँहरुले नियमित जसो कृषकहरुको घर घरमा आएर दिएको ज्ञान र प्रोत्साहनले यहाँका कृषकहरु उत्साहित भएर व्यवसायीक खेती र पशुपालनमा लागेका छन् । यस सम्वन्धमा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी चेतनाथ अधिकारी संग सम्पर्क राख्दा जिल्लाका प्राया सवै गाविसमा आफुहरुले अपेक्षा राखे अनुसारको प्रगती कृषि क्षेत्रमा हुन थालेको बताए ।
अहिले गुल्मीका विभिन्न गाविसमा विदेशबाट फर्किएका युवाहरुले विदेशमा आफुले सिकेको सिप र अनुभव अनुसारको तरकारी खेती, बाख्रा, वंगुर र माछा पालन गर्न थालेका छन् । जिल्ला विकास समित गुल्मीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष देखि सुरु गरे गरेको दश वर्षे कृषि योजनाको अवधारण अनुसार कृषि विकास कार्यालयले काम गरेको हो ।
स्थानिय विकास अधिकारी डिलारमा पन्थीले आधुनिक कृषि प्रणालीले मात्रै कृषकहरुको मुहार फेरिने हुनाले आफुहरुले त्यस तर्फ जोड दिदै आएको बताँदै आएका छन् । त्यस कार्यमा यहाँका सवै राजनैतिक दलहरु पनि एक मत भएर लागेका छन् । Comments comments	Related Posts	गुल्मीमा झण्डै ३ सय मेट्रिक टन मकैको विउ उत्पादनको लक्ष्य...	September 10, 2016	जैसीथोक गाविसको मुहार फेर्दै हेफर, घाँसको पकेट क्षेत्र बनाउने अभियान शुरु...	July 12, 2016	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ताजा अप्डेट	राति १० बजे पछि देउसी–भैलो खेले कारबाही हुने